ကိုဗစ် မကူး စေ ဖို့ သဘာဝ က ပေး တဲ့ အကောင်း ဆုံး ကာကွယ် ဆေး – Cele Posts
နိုင်ငံခြား မှာ နေတဲ့ ကျနော့် သူငယ်ချင်း ၅ ယောက်ဟာ တစ်အိမ်ထဲ မှာ အတူတူနေကြ ပါတယ်။ သူတို့ ၅ ယောက်လုံးက ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ တွေ့ခဲ့ကြ သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၅ ယောက်မှာ ၂ ယောက်က ရောဂါကူးစက် မခံရပေမဲ့ ကျန်တဲ့ ၃ယောက် ကတော့ ပေါ့စတစ်ဖြစ်သွား တယ်။ လူ၅ယောက် ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ တွေ့ကြုံရတာချင်းအတူတူ ၃ယောက်က ရောဂါရပြီး ၂ယောက်က ဘာလို့ လွတ်သွားရတာလဲ….? အဖြေကတော့ ကိုယ်ခံ စွမ်းအားချင်း မတူလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါမရတဲ့သူတွေက ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကောင်းကြပြီး ရောဂါရသွားကြသူတွေကတော့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားနည်းလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ် ကိုယ်ထဲကိုဝင်လာပြီ ဆိုတာနဲ့ အရင်ဆုံး ထွက်လာတာ ကတော့ ကိုယ်ခံ စွမ်းအားထဲက Anti body တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်လာ တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကို Anti body တွေက သွားရောက် ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ အတွက် လူကို ရောဂါမကူးစက်နိုင်တော့ဘူး။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ခံစွမ်းအားအနည်းနဲ့ အများရှိကြပေမဲ့ အချို့လူတွေမှာ အနည်းငယ်လောက်ပဲ ရှိတဲ့အတွက် ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ဝင်လာတာ များရင် မခုခံနိုင်တော့ဘဲ ကျရှုံးသွားရတဲ့အတွက် ရောဂါကူးစက်ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ခံစွမ်းအားဆိုတာက အမေမွေး ကတည်းက လူတိုင်းမှာပါလာပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကိုယ်ခံစွမ်း အားချင်း မတူကြဘူး။ ကိုယ်ခံအားနည်းကြ ရတာဟာ ဘာကြောင့်ပါလဲ..? အကြောင်းအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ မိခင်နို့မစို့ခဲ့ရတဲ့သူတွေ ၊အသည်းမှာ BပိုးCပို့း H ပိုးရှိတဲ့သူတွေ၊ နာတာရှည်ရောဂါ ရှိကြတဲ့သူတွေ၊ free radical များတဲ့သူတွေ၊ အာဟာရချို့တဲ့သူတွေ၊ ဆေးလိပ်အရက်စွဲနေကြသူတွေ စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလူတွေဟာ အခုလို ကိုဗစ်ကာလမှာ ရောဂါကူးစက်ခံရဖို့ သိပ်လွယ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အခုသေနေကြတဲ့သူတွေမှာ အဲ့လို ကိုယ်ခံစွမ်းအားနည်းသူတွေချည်းပဲ ဖြစ်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့အားလုံး အတွက် အရေးအကြီးဆုံး အချက်က ကိုယ်ခံစွမ်း အားကို အမြင့်ဆုံး ဖြစ်အောင် Boost လုပ်ထာကြဖို့ဆိုတာ ထင်ရှား ပါတယ်။ လူတိုင်းကတော့ ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကောင်းအောင် လုပ်ချင်ကြတာပါပဲ။ သို့သော်လည်း ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ဂ ဃနဏမသိကြဘူး။ ကြားဖူးနားဝလေးတွေပဲ လိုက်လုပ်နေကြရတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို အတိအကျပြောပြပါမယ်။ အခုကာလအတွက် သာမက တစ်သက်လုံးရောဂါကင်းပြီး သက်တမ်းစေ့အောင် နေနိုင်ဖို့လည်း အသုံးကျတဲ့အတွက် မြန်မာများ အားလုံး သေသေချာချာ မှတ်သားထားစေချင်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ ကိုယ်တွင်းကနေ ကိုယ်ခံစွမ်းအား ထွက်လာ တဲ့ အရင်းအမြစ် ၃ ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့- (၁) သွေးရည်ကြည် (၂)သွေး (၃) အူပိုး
အဲဒီ၃ခုဖြစ်ပါတယ်။ သွေးရည်ကြည် အကြောင်း စပြောမယ်။ ကျနော်တို့ ခေါင်းအစခြေအဆုံး လှည့်ပတ်စီးဆင်းနေတဲ့ အကြည်ရောင် အရည်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒါကို `လင်ဖက်တစ်´ လို့ခေါ်ပါတယ်။ မြန်မာလိုတော့ သွေးရည်ကြည်ပေါ့။ အဲဒီလင်ဖက် တစ်သွေးရည်ကြည်ထဲမှာ ပြင်ပရောဂါပိုးတွေ ဝင်လာရင် ချက်ချင်းတိုက်ထုတ်ပေးမယ့် Anti body တွေ ထြီလျံချီပြီး ရှိပါတယ်။ အနောက်တိုင်းဆေးပညာရှင်တွေကတော့ T cell, B cell စသည်ဖြင့် ခေါ်ကြပါတယ်။ အဲဒီသွေးရည်ကြည် အားကောင်းမှကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ခုက သွေး။ သွေးထဲမှာ သွေးနီဥတွေနဲ့ အတူရောပြီး ရှိနေတာက သွေးဖြူဥတွေဖြစ်တယ်။ အနောက်တိုင်းဆေးပညာရှင်တွေ ကတော့ WBC လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ သွေးဖြူဥတွေကလည်း ကိုယ်ထဲဝင်လာတဲ့ ရောဂါပိုးမှန်သမျှကို ဖျက်ဆီးဝါးမျိုပေးပါတယ်။ တတိယတစ်ခုကတော့ အူတွေထဲမှာရှိနေတဲ့ အကျိုးပြုပိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအူပိုးတွေကလည်း ကိုယ်တွင်းကို ဝင်လာတဲ့ ရောဂါပိုးတွေကို ကိုက်ဖျက် ဝါးမျိုပစ်လိုက်ကြပါတယ်။
ဆိုတော့ အဲဒီ ၃ မျိုး အားကောင်းနေမယ် ဆိုရင် ကိုယ်ခံစွမ်းအားက မြင့်နေပြီး မည်သည့်ရောဂါပိုးမှ ကိုယ့်ကို ဒုက္ခပေးလို့ မရနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် အဲဒီ ၃မျိုးလုံး အားကောင်း အောင် လုပ်ရမယ်ပေါ့။ ပထမတစ်ခုဖြစ်တဲ့ သွေးရည်ကြည် အားကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ သွေးရည်ကြည်ဖြစ်ပေါ်လာစေတာက ကျနော်တို့ စားလိုက်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးဝလံတွေကရတဲ့ Enzyme တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်တွေ မျိုးစုံပါတဲ့ အသီးအရွက်တွေပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ဗီတာမင်စီ ကြွယ်ဝတဲ့ အရည်ရွှမ်းသစ်သီးတွေထဲက Antioxidant ဓာတ်ဟာ အင်မတန်အခရာကျပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရောင်မျိုးစုံရှိတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ သစ်သီးဝလံတွေ များများစားခြင်း ကြိတ်သောက်ခြင်းတွေက သွေးရည်ကြည်ကို အားကောင်းစေပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ သွေးထဲက သွေးဖြူ ဥအားကောင်းအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာ ဆက်ပြောမယ်။ သွေးဖြူ ဥဟာ ပရိုတင်း တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ သူ့ကို အမိုင်နိုအက်စစ် တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အဲဒီ အမိုင်နိုအက်စစ်တွေ အဓိကရတဲ့ source ကတော့ အနီရောင် အသားနဲ့ အသည်းဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆိတ်သားနဲ့ ဆိတ်ကလီစာတွေမှာ အများဆုံးပါဝင်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်အသည်းမှာ ဗီတာမင်တွေ သတ္တုဓာတ်တွေ တော်တော်စုံအောင် ပါပါတယ်။ အကယ်၍ သက်သတ်လွတ်စားတယ် ဆိုရင်ပဲပုပ်ပဲကို စားခြင်းဖြင့် အမိုင်နိုအက်စစ်ပရိုတင်းကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
တတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အူတွင်းအကျိုးပြု ပိုးမွေးဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ လွယ်လွယ်လေးပါပဲ။ probiotic ပိုးတွေအများကြီးပါတဲ့ အိမ်လုပ်ချဉ်ဖတ်မျိုးစုံ ၊ကင်မ်ချီ၊ ရှမ်းမုံညင်းချဉ်၊ ဒိန်ချဉ်၊ပုစွန်ချဉ်၊ ငါးဖယ်ချဉ်၊ငါးလေးချဉ်၊ ဝက်သားချဉ်၊ကီဖာတွေကို နေ့စဉ်သင့်ရုံစားသောက်ရုံနဲ့ကို ဘီလျံချီတဲ့ အကျိုးပြုပိုးတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးတွေနေတဲ့ အူလမ်းကြောင်း ခိုင်ခံ့ဖို့ အရိုးပြုတ်ရည်သောက်ပေးဖို့ လိုတယ်။ အူတွေသန့်ဖို့အတွက် ဝမ်းမှန်အောင်သွားပေးဖို့လည်း လိုပါတယ်။
အဲဒီ ၃ မျိုး အပြင် ဘာလိုအပ်သေးလဲဆိုတော့ ဟိုမုန်းပါ။ တိရစ္ဆာန်အဆီကိုစားပြီး နေပူဆာလှုံပေးရင် ဗီတာမင် D ဓာတ်ထွက်လာပါတယ်။ ဗီတာမင် D ဟာ ကိုယ်တွင်းမှာ ဟိုမုန်းတစ်ခုအနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ပေးပါတယ် ။အဲဒါတွေအားလုံးအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့အတွက် အိပ်ရေးဝဖို့ရယ် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်းကို ချွေးပုပ်တွေ ထွက်သွားတဲ့အထိလုပ် နေ့စဉ်လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေက လတ်တလောကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကာလနာရောဂါ တစ်ခုတည်း အတွက်မဟုတ်ဘူး၊ တစ်သက်လုံး ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းပြီး ကျန်းမာအသက်ရှည်ဖို့၊ အသက်ကြီးသည် အထိ ဖလန်းဖလန်းထနိုင်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက် သေချာမှတ်ထားပြီး ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း ကုသိုလ်ဖြစ် မျှဝေပေးကြစေချင်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေများ အားလုံးမိမိရဲ့ Body ကို immunity ကောင်းပြီး၊ မည်သည့် ပြင်ပရောဂါပိုးလာလာ ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ၊ခံတပ်အဖြစ် တည်ဆောက်ထားကြပါလို့…….
ကိုဗဈ မကူး စေ ဖို့ သဘာဝ က ပေး တဲ့ အကောငျး ဆုံး ကာကှယျ ဆေး
နိုငျငံခွား မှာ နတေဲ့ ကနြေျာ့ သူငယျခငျြး ၅ ယောကျဟာ တဈအိမျထဲ မှာ အတူတူနကွေ ပါတယျ။ သူတို့ ၅ ယောကျလုံးက ကိုဗဈဗိုငျးရပျဈနဲ့ တှခေဲ့ကွ သူတှေ ဖွဈပါတယျ။ ၅ ယောကျမှာ ၂ ယောကျက ရောဂါကူးစကျ မခံရပမေဲ့ ကနျြတဲ့ ၃ယောကျ ကတော့ ပေါ့စတဈဖွဈသှား တယျ။ လူ၅ယောကျ ဗိုငျးရပျဈနဲ့ တှကွေုံ့ရတာခငျြးအတူတူ ၃ယောကျက ရောဂါရပွီး ၂ယောကျက ဘာလို့ လှတျသှားရတာလဲ….? အဖွကေတော့ ကိုယျခံ စှမျးအားခငျြး မတူလို့ပဲဖွဈပါတယျ။ ရောဂါမရတဲ့သူတှကေ ကိုယျခံစှမျးအား ကောငျးကွပွီး ရောဂါရသှားကွသူတှကေတော့ ကိုယျခံစှမျးအားနညျးလို့ ဖွဈပါတယျ။
ဗိုငျးရပျဈ ကိုယျထဲကိုဝငျလာပွီ ဆိုတာနဲ့ အရငျဆုံး ထှကျလာတာ ကတော့ ကိုယျခံ စှမျးအားထဲက Anti body တှဖွေဈပါတယျ။ ဝငျလာ တဲ့ ဗိုငျးရပျဈကို Anti body တှကေ သှားရောကျ ဖကျြဆီးလိုကျတဲ့ အတှကျ လူကို ရောဂါမကူးစကျနိုငျတော့ဘူး။ လူတိုငျးမှာ ကိုယျခံစှမျးအားအနညျးနဲ့ အမြားရှိကွပမေဲ့ အခြို့လူတှမှော အနညျးငယျလောကျပဲ ရှိတဲ့အတှကျ ဗိုငျးရပျဈတှေ ဝငျလာတာ မြားရငျ မခုခံနိုငျတော့ဘဲ ကရြှုံးသှားရတဲ့အတှကျ ရောဂါကူးစကျခံရတာ ဖွဈပါတယျ။
ကိုယျခံစှမျးအားဆိုတာက အမမှေေး ကတညျးက လူတိုငျးမှာပါလာပွီးသား ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လူတဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ကိုယျခံစှမျး အားခငျြး မတူကွဘူး။ ကိုယျခံအားနညျးကွ ရတာဟာ ဘာကွောငျ့ပါလဲ..? အကွောငျးအမြိုးမြိုး ရှိပါတယျ။ မိခငျနို့မစို့ခဲ့ရတဲ့သူတှေ ၊အသညျးမှာ BပိုးCပို့း H ပိုးရှိတဲ့သူတှေ၊ နာတာရှညျရောဂါ ရှိကွတဲ့သူတှေ၊ free radical မြားတဲ့သူတှေ၊ အာဟာရခြို့တဲ့သူတှေ၊ ဆေးလိပျအရကျစှဲနကွေသူတှေ စသညျဖွငျ့ပေါ့ဗြာ။ အဲဒီလူတှဟော အခုလို ကိုဗဈကာလမှာ ရောဂါကူးစကျခံရဖို့ သိပျလှယျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး အခုသနေကွေတဲ့သူတှမှော အဲ့လို ကိုယျခံစှမျးအားနညျးသူတှခေညျြးပဲ ဖွဈနတောတှရေ့လိမျ့မယျ။
ဒါကွောငျ့ ကနြျောတို့အားလုံး အတှကျ အရေးအကွီးဆုံး အခကျြက ကိုယျခံစှမျး အားကို အမွငျ့ဆုံး ဖွဈအောငျ Boost လုပျထာကွဖို့ဆိုတာ ထငျရှား ပါတယျ။ လူတိုငျးကတော့ ကိုယျခံစှမျးအား ကောငျးအောငျ လုပျခငျြကွတာပါပဲ။ သို့သျောလညျး ဘယျလိုလုပျရမယျဆိုတာကိုတော့ဂ ဃနဏမသိကွဘူး။ ကွားဖူးနားဝလေးတှပေဲ လိုကျလုပျနကွေရတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ကိုယျခံစှမျးအားကောငျးအောငျ ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတာကို အတိအကပြွောပွပါမယျ။ အခုကာလအတှကျ သာမက တဈသကျလုံးရောဂါကငျးပွီး သကျတမျးစအေ့ောငျ နနေိုငျဖို့လညျး အသုံးကတြဲ့အတှကျ မွနျမာမြား အားလုံး သသေခြောခြာ မှတျသားထားစခေငျြပါတယျ။
မိမိရဲ့ ကိုယျတှငျးကနေ ကိုယျခံစှမျးအား ထှကျလာ တဲ့ အရငျးအမွဈ ၃ ခုရှိပါတယျ။ အဲဒါတှကေတော့- (၁) သှေးရညျကွညျ (၂)သှေး (၃) အူပိုး
အဲဒီ၃ခုဖွဈပါတယျ။ သှေးရညျကွညျ အကွောငျး စပွောမယျ။ ကနြျောတို့ ခေါငျးအစခွအေဆုံး လှညျ့ပတျစီးဆငျးနတေဲ့ အကွညျရောငျ အရညျတှရှေိပါတယျ။ အဲဒါကို `လငျဖကျတဈ´ လို့ချေါပါတယျ။ မွနျမာလိုတော့ သှေးရညျကွညျပေါ့။ အဲဒီလငျဖကျ တဈသှေးရညျကွညျထဲမှာ ပွငျပရောဂါပိုးတှေ ဝငျလာရငျ ခကျြခငျြးတိုကျထုတျပေးမယျ့ Anti body တှေ ထွီလြံခြီပွီး ရှိပါတယျ။ အနောကျတိုငျးဆေးပညာရှငျတှကေတော့ T cell, B cell စသညျဖွငျ့ ချေါကွပါတယျ။ အဲဒီသှေးရညျကွညျ အားကောငျးမှကိုယျခံစှမျးအားကောငျးတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒုတိယတဈခုက သှေး။ သှေးထဲမှာ သှေးနီဥတှနေဲ့ အတူရောပွီး ရှိနတောက သှေးဖွူဥတှဖွေဈတယျ။ အနောကျတိုငျးဆေးပညာရှငျတှေ ကတော့ WBC လို့ချေါကွပါတယျ။ အဲဒီ သှေးဖွူဥတှကေလညျး ကိုယျထဲဝငျလာတဲ့ ရောဂါပိုးမှနျသမြှကို ဖကျြဆီးဝါးမြိုပေးပါတယျ။ တတိယတဈခုကတော့ အူတှထေဲမှာရှိနတေဲ့ အကြိုးပွုပိုးတှဖွေဈပါတယျ။ အဲဒီအူပိုးတှကေလညျး ကိုယျတှငျးကို ဝငျလာတဲ့ ရောဂါပိုးတှကေို ကိုကျဖကျြ ဝါးမြိုပဈလိုကျကွပါတယျ။
ဆိုတော့ အဲဒီ ၃ မြိုး အားကောငျးနမေယျ ဆိုရငျ ကိုယျခံစှမျးအားက မွငျ့နပွေီး မညျသညျ့ရောဂါပိုးမှ ကိုယျ့ကို ဒုက်ခပေးလို့ မရနိုငျဘူး။ ဒါကွောငျ့ အဲဒီ ၃မြိုးလုံး အားကောငျး အောငျ လုပျရမယျပေါ့။ ပထမတဈခုဖွဈတဲ့ သှေးရညျကွညျ အားကောငျးအောငျဘယျလိုလုပျရမလဲ။ သှေးရညျကွညျဖွဈပျေါလာစတောက ကနြျောတို့ စားလိုကျတဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျနဲ့ သဈသီးဝလံတှကေရတဲ့ Enzyme တှဖွေဈပါတယျ။ ဗီတာမငျတှေ မြိုးစုံပါတဲ့ အသီးအရှကျတှပေါပဲ။ အထူးသဖွငျ့ ဗီတာမငျစီ ကွှယျဝတဲ့ အရညျရှမျးသဈသီးတှထေဲက Antioxidant ဓာတျဟာ အငျမတနျအခရာကပြါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အရောငျမြိုးစုံရှိတဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှေ သဈသီးဝလံတှေ မြားမြားစားခွငျး ကွိတျသောကျခွငျးတှကေ သှေးရညျကွညျကို အားကောငျးစပေါလိမျ့မယျ။
ဒုတိယ တဈခုဖွဈတဲ့ သှေးထဲက သှေးဖွူ ဥအားကောငျးအောငျ ဘယျလို လုပျရမလဲဆိုတာ ဆကျပွောမယျ။ သှေးဖွူ ဥဟာ ပရိုတငျး တဈမြိုးဖွဈတယျ။ သူ့ကို အမိုငျနိုအကျစဈ တှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးထားပါတယျ။ အဲဒီ အမိုငျနိုအကျစဈတှေ အဓိကရတဲ့ source ကတော့ အနီရောငျ အသားနဲ့ အသညျးဖွဈပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဆိတျသားနဲ့ ဆိတျကလီစာတှမှော အမြားဆုံးပါဝငျပါတယျ။ တိရစ်ဆာနျအသညျးမှာ ဗီတာမငျတှေ သတ်တုဓာတျတှေ တျောတျောစုံအောငျ ပါပါတယျ။ အကယျ၍ သကျသတျလှတျစားတယျ ဆိုရငျပဲပုပျပဲကို စားခွငျးဖွငျ့ အမိုငျနိုအကျစဈပရိုတငျးကို ရရှိနိုငျပါတယျ။
အဲဒီ ၃ မြိုး အပွငျ ဘာလိုအပျသေးလဲဆိုတော့ ဟိုမုနျးပါ။ တိရစ်ဆာနျအဆီကိုစားပွီး နပေူဆာလှုံပေးရငျ ဗီတာမငျ D ဓာတျထှကျလာပါတယျ။ ဗီတာမငျ D ဟာ ကိုယျတှငျးမှာ ဟိုမုနျးတဈခုအနနေဲ့ အလုပျလုပျပေးပါတယျ ။အဲဒါတှအေားလုံးအလုပျကောငျးကောငျးလုပျဖို့အတှကျ အိပျရေးဝဖို့ရယျ ကိုယျလကျလှုပျရှား လကေ့ငျြ့ခနျးကို ခြှေးပုပျတှေ ထှကျသှားတဲ့အထိလုပျ နစေ့ဉျလုပျပေးဖို့ လိုပါတယျ။ အခုပွောခဲ့တဲ့အခကျြတှကေ လတျတလောကွုံတှနေ့ရေတဲ့ ကာလနာရောဂါ တဈခုတညျး အတှကျမဟုတျဘူး၊ တဈသကျလုံး ကိုယျခံစှမျးအားကောငျးပွီး ကနျြးမာအသကျရှညျဖို့၊ အသကျကွီးသညျ အထိ ဖလနျးဖလနျးထနိုငျဖို့ဖွဈတဲ့အတှကျ သခြောမှတျထားပွီး ကိုယျ့မိတျဆှတှေကေိုလညျး ကုသိုလျဖွဈ မြှဝပေေးကွစခေငျြပါတယျ။
လူနာတင် ကားကို တောင် အတု လုပ်ပြီး ကယ်ရီ ဆွဲတာ တဲ့ဗျာ